इटहरीको केन्द्र वडा नं ६ लाइ कस्तो बनाउने ? (भिडीयो सहित) | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » बिबिध » इटहरीको केन्द्र वडा नं ६ लाइ कस्तो बनाउने ? (भिडीयो सहित)
Posted by Itahari Fm | error | ५६३ पटक
इटहरी उपमहानगरपालीका को लागी कस्तो नेतृत्व आउने हो भन्ने बिषयमा सबैतिर चर्चा र बहस सुरु भएको छ । त्यसमा पनी इटहरीको लागी सम्पुर्ण प्रतिनिधित्वको रुपमा वडा नं ६ लाइ मान्ने गरीन्छ । जुन पुर्वमा बुढी खोला देखी पश्चिममा कलंकी चोक सम्मको मुख्य बजार क्षेत्र भित्र पर्छ । जसलाइ ट्रान्जिट र ट्रेडको केन्द्र पनी मानीन्छ । धेरै जनधनत्व हुने र आवत जावतको रुपमा इटहरी सहरको खास मुहार पनी हो । हरेक हिसाबमा वडा नं ६ महत्वपुर्ण भएकोले इटहरीको पहिचान बनाउने जिम्वेवारी अबको स्थानीय जनप्रतिनिधि कै हो । इटहरीको सबै भन्दा खास वडा लाइ नमुना वडा बनाउने योजना र नेपाली कांग्रसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा वडा नं ६ का वडाध्यक्षका उमेद्धवार दिपक गौतम संग गरीएको कुराकानी ।
इटहरीको चुनावी सरगर्मी लाइ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
इटहरी पुर्वको एक महत्वपुर्ण सहर भएकोले यहाँ सबै राजनैतीक दलहरुले आफ्नो बर्चश्व राख्न खोज्नु स्वभाबिक नै हो । यसलाइ जनताको अधिकारी स्थापीत गर्ने एउटा उच्चतम प्रकृयाको रुपमा मैले लिएको छु ।
इटहरीमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको अवस्था धेरै चिन्ताजनक पनी छैन र धेरै ढुक्क हुनुपर्ने अवस्थाको पनी छैन । समग्रमा टिकट बितरण प्रकृया देखी प्रचार प्रसारको समयमा विवेक पु¥याउन सके बिजयी हुन सकिन्छ ।
तपाइ वडा नं ६ को वडाध्यक्षको उमेद्धवार हुनुहुन्छ । के छ योजना ?
वडा नं ६ अरु वडा भन्दा फरक छ । यसलाइ इटहरीको राजधानीको रुपमा लिन सकिन्छ । यहाँ सडक बत्ति भन्दा पनी सभ्यता को बिकाश गर्न जरुरी छ । नयाँ आगन्तुक आउदा सबैभन्दा पहीला यही वडामा केन्द्रित हुने भएकोले यसलाइ इटहरीको पहीचानको रुपमा बिकाश गर्नु छ । जसको लागी ट्याङ्ग्रा खोलालाइ ब्यवस्थित गरेर ग्रिन सिटीको रुपमा बिकाश गर्ने, बजारमा आवत जावत ह्वातै बढेको छ जसकोलागी आकाशे पुल व्यवस्था गर्ने, ढल निकाश को राम्रा प्रबन्ध मिलाउने, सार्वजनीक शैचालय र रिफरेन्स हल मेरो प्राथमीक कार्य भित्र पर्छन ।
यी भन्दा बाहेक इटहरीको लागी गर्न आवश्यक के देख्नु हुन्छ ?
इटहरी लाइ व्यवस्थित गर्न जनप्रतिनिधि ले मात्र लागेर सबैकुरा सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले जनता लाइ बिकाश निर्माण उत्साहीत गर्नु, मेरो आफ्नै सहर हो भनेर अपनत्व महसुस गराउनु, सहरलाइ जिवन्त राख्न साहीत्य चाहीन्छ त्यसकोलागी गतिविधि गर्ने स्थानको व्यवस्था गराउनु र भ्रस्टचारको बिरुद्धमा अभियान चाल्नु मेरो बाकी जिम्वेवारी रहन्छ ।
चुनाव प्रचारप्रसार तिव्र पार्नु भएको छ । जनताको प्रतीक्रृया कस्तो छ ?
जनता पुर्णरुपमा चुनावको पक्षमा छन । मैले सोचे भन्दा पनी धेरै जनताहरु उत्साहीत पाए । वाहाँहरु संगको प्रत्यक्ष भेटघाटको क्रममा अब स्थानीय स्तर देखिनै युवाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो भन्ने छ । बिस बर्ष पहिलाको उमेद्धवार अहिले पनी स्थनीय नेतृत्वमा आउदा परीवर्तनको प्रत्याभुती दिलाउन सक्दैन भन्ने भावना पाइन्छ ।
SAMAYA BISES Nc leader deepak gautam Binaya Barakoti Nepali Congress Sunsari Nepali Congress Nepali Congress Central Office
Posted by Itahari fm on Wednesday, 24 May 2017